Birta Shiinaha Birta Birta Warshad Warshad iyo soosaarayaal | Mustaqbalka
Kubadda waalka birta ah iyo kursiga waa qaybaha muhiimka ah ee birta fadhida. Waxaa loogu talagalay cadaadis aad u sarreeya, heer kulka iyo xaaladaha abrasive, sida goynta ama isku xirka dhagaxyada adag, slurry dhalaalay, awoodda dhuxusha, qafis qalalan, biyaha uumiga ama dareeraha kale iwm Sidaa darteed waxay leedahay muuqaalka dhismaha anti-ma guurto ah, dheeraad ah daahan adag, ceel buuxa iyo ceel yaraaday, muuqaalka nabdoon ee dabka ee u hoggaansamaya API607, iyo waxqabadka xiritaanka kalsoonida leh.
Kuraasta Birta iyo Kubadda waxaa laga sameeyaa biraha aasaasiga ah ee sida caadiga ah lagu duuduubay chrome adag, tungsten carbide, stelite iyo Ni60. Waxaan leenahay daahan buufinta kuleylka ah iyo kuwa lagu buufiyo qabow ee la heli karo sida Laser Cladding, HVOF (Xawaaraha Sare ee Oxy Flame) Dahaarka, Oxy-acetylene flame spray, Plasma spray spray.
Kubbadda iyo Kursiga Lapping
Kubad fadhiga birta ah iyo kursiga, waa inaan siinaa macaamiisha dhameystiran qalabka wax lagu xiro + xirmooyinka kuraasta maxaa yeelay kubbada iyo kursigu waxay u baahan yihiin dhicitaan kahor inta aan loo dirin inay u adeegaan. Sanadihii la soo dhaafay, Waxaan u soo saarnay tiknoolajiyad kubbadda cagta oo u gaar ah kubbadda iyo kursiga dahaarka leh. Iyada oo loo marayo jihada isku midka ah iyo kaladuwan ee wareegga, kubbadda iyo kursiga natiijada natiijo wareegsan oo taam ah, oo lagu gaaro "Zero Leakage"
Qeexitaanka Qalabka Fudud ee Birta Fadhiya
Iska caabinta kuleylka
ASTM A105 (N), A350 LF2, A182 F304 (L), A182 F316 (L), A182 F6A, A182 F51, A182 F53, A564 630 (17-4PH), Monel, Alloy iwm,
Buufin kuleylka iyo buufin qabow:
Dayax gacmeedka 6 # 12 # 20 #, Inconel, iwm
Hore: T-nooca seddex geesood kubbada QC-301
Xiga: Kubad sabaynaysa